free call singapore and other seven countries — MYSTERY ZILLION
free call singapore and other seven countries
September 2009 edited February 2010 in Internet & Email
ဟုတ်ကဲ့..စင်ကာပူကို Free ခေါ်ဆိုလို့ရနေပါပြီ.......software က mediaringtalk လေးပါ....မသိသေးသူများအတွက်ပါ...ဘယ်အချိန်ထိ free ပေးလဲသိချင်ရင်တော့်ဒီမှာ..ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ပေါ့ဗျာ.....ဘယ်နိုင်ငံကို free ခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့် Australia,Canadia,China,USA,Singapore,Taiwan,UK,Hong Kong ပါ...ု (ကျန်တာကတော့် ပိုက်ပိုက်ပေးရင်ရမယ်တယ့် ):)):)):)):)):)):)):))Pfingo ထက်အားသာချက်ကတော့် code မသိလည်းရတယ်ဗျ.... ရှုပ်ကုန်ပြီလားမသိဘူး...ဒီလိုဘဲ..သည်းခံပေးပါ..ဒီလိုဗျာ...စင်ကာပူကိုခေါ်ချင်ရင် Singapore country ကိုရွေးလိုက်ရင် code ချပေးပြီးသားဗျ ဖုန်းနံပါတ်တန်းရိုက်လိုက်ရင်ရပြီ...........
ပြောတာများနေပြီ ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်လိုက်ဗျာ...........ဒီမှာ sign up လုပ်ဗျာ.........
ဒီမှာ.. software download ဆွဲပါ.......အော် ..................... ဒီမှာ countries code တွေကိုမသိရင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျ.....ဘယ်နိုင်ငံဘာကုဒ်ပေါ့ဗျာ......
အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ......အဆင်ပြေရင်သာ.....coffee မတိုက်လည်းရပါတယ်:67::67::67:thanks လေးဘဲ\_:D/\_:D/\_:D/\_:D/
ဘာဘဲပြောပြော စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်.... Free ဆိုကြိုက်ကြိုက်ပေါ့။ ရသာ မရသာ (မိမိရရ ကိုပြောတာမဟုတ်ပါ) အပထား အခုလို သိ်သလို ရှဲတာကိုက မွန်မြတ်ပါတယ်ဗျာ...:77:
singup လုပ်ကြည့်လိုက်တာ ..... ကျနော်မသိသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တော်များများကို တွေ့လိုက်ရတယ်...:5:
calling - xxxxxxxxxxxxxxxxx ကနေ မတက်တော့ဘူး။ ဟွန်း...:2:
sign up လုပ်တာတော့ ရသွားပြီ.. ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာ က မရသေးတော့ မစမ်းရသေးဘူး.. ဒေါင်းလုပ်က 5.8M ဆိုတော့.. ၀ုိင်မက်စ်နဲ့ သုံးနေတာဆိုတော့..ဒေါင်းလုပ်ပြိးအောင်. စောင့်ဖို့ရာလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်... ညနေလောက်မှ ပြီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်.. speed က 2k or 3k ပဲ ရှိတာ်... ဆော့၀ဲလ်် ရမှ ပဲ စမ်းကြည့်တော့မယ်.. အခုလိုမျှေ၀ပေးတာ ကို.ကျေးဇူး တင်ပါတယ်....
ကို ဂေလ်းလေရေ...တကယ် ရလို့လား။ ငါ ကတော့ မရဘူးဆိုပြီး software uninstall လုပ်လိုက်ပြီ။
ကျွန်တော်ဆို singin တောင်၀င်လို့တောင်မရဘူး ဖြစ်နေတာ။ ကူညီပါအုံးဗျာ။
ကျွန်တော် wimax no proxy သုံးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျ.............စင်ကာပူကိုတောင်အခကြေးနဲ့ခေါ်ပေးလိုက်သေးတယ်:)
မရရင် proxy ချိန်းပြီးသုံးကြည့်ပါလား............ကျွန်တော်တော့တကယ်သုံးလို့ရတာပါ.........အ၀င်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဗျ...
ကျွန်တော့ account နဲ့စမ်း၀င်ကြည့်ပါလား
အဲဒါက အနဲဆုံး 100kbps upload/download ရှိမှသုံးလို့ရမယ်။ အဲဒီလောက်မရှိရင်ဘာအသံမှကြားရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ
သူငယ်ချင်းတို ့အဲဒီ mediaring talk က no proxy နဲ ့ဒီတိုင်း၀င် သုံးရင်အဆင်မပြေဘူးဗျ၊ freedom ခံပြီးသုံးမှ အဆင်ပြေတာ၊ bandwidth ကလည်း ဘာမှ မယူဘူး 30 kbytes/s လောက်ဘဲယူတယ်၊ စ လုံး ကို ပြောတာ pfingo ကို မရှုံးဘူး ၊ တချို ့ဖုန်း တွေ pfingo နဲ ့ခေါ်လို ့မရတာရှိတယ်၊ သူနဲ ့ခေါ်လို ့ရတယ်၊ freedom connect ဖြစ်ပြီးရင် သူ ့ကို sign in လုပ် ခန ဘဲ
setting မှာ တော့connect socks4/5 127.0.0.1 port 1080 လို ့ပြင်ထားရမယ်၊ ၁၀ မိနစ်ပြောပြီးရင် တခါကျတယ်၊ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ
အဲဒါက အနဲဆုံး 100Mbps upload/download ရှိမှသုံးလို့ရမယ်။ အဲဒီလောက်မရှိရင်ဘာအသံမှကြားရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ
ဟဲ ဟဲ အကို က နောက်တယ်နော်။ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဒီ speed ကို။:68:
အင်း.. အဆ ၂၀ စီမံကိန်းကြီး ပြီးရင်တော့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် :39:
ဟီး....မှားသွားလို့ ဆော်တီး။ ၁၀၀kbps ပါခင်ဗျာ။:P
do u mean 30kbs (30)KBs? thirty kilobyetes per second?
if so, 30x8= 240 kilo bits per second, it's ok?
then, you will ned bandwidth 256 kilobits per second Pland from your ISP. for your PC only.
i think all ISP measure the bandwidth by Kilobits per second. Not kilobytes per second.
when i test bandwidth with speedtest.net , it shows Mbs
that means capital letter B is Bytes
small letterbis Bits.
k (kilo) may be anything.
ရဖူး အကိုရဲ့ server busy လို့ပြတယ်ဘာလုပ်ရမလဲ။:((
do u mean 30kbs (30)KBs?
Sorry အကိုရေ 30 kilo bits/s ပါ၊ ပြင်ပေးတာကျေးဇူးပါ၊
server busy လို ့ပေါ်တာက ဒီတိုင်းရိုးရိုး ၀င်လို ့နဲ ့တူတယ်၊
account တော့ရထားတယ် ဘယ်လိုဆက်ရမလဲ မသိလို့ပါ၊ ကူညီကြပါဗျို့:13::13:
ကျွန်တော် Pfingo account မှာ ပိုက်ဆံ ကုန်သွားလို့ ပိုက်ဆံ ပြန်သွင်းဖို့ ကြားမှာ တခါ တလေ အသုံးပြုတဲ့ ဖရီး ဖုံးကော လေးပါ
ကျွန်တော် တော့ စင်ကာပူ တစ်နိုင်ငံ ပဲ ခေါ်ဖူးပါတယ် ၅ မိနစ် တိတိ စကားပြောလို့ရပါတယ်
၅ မိနစ်ပြည့်သွားရင်တော့ ပိုက်ဆံ တောင်းတယ် ၊ ထပ်ပြီးတော့လည်း ဖရီးခေါ်လို့ မရတော့ပါဘူး
ထပ်ခေါ်ချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ နောက် အကောင့်တခု ထပ်လုပ်တော့ပဲ
ဒီမှာ http://http://www.voipzoom.com/en/websignup.php?type=subscription Register လုပ်
ဒီမှာ http://http://www.voipzoom.com/en/download.html Download ဆွဲ
တကယ်လည်း ခေါ်လို့ ရပါတယ် ( ၅ မိနစ် ):6:
အခုလို မျှေ၀ပေးတဲ ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.............:d:d:d
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Pfingo က အခုလောလောဆယ် နေ့လယ်ဘက်နဲ့ ညနေဘက်လောက်ဆိုသုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ media ring ကရောသုံးလို့ရပါလားခင်ဗျာ။:39:
signing in ကနေမတက်တော့ဘူး လုပ်ပါဦး။ :O
free call လည်း မရဘူးနော် ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း ဗျ ... ထောင်းလို့ လည်း ပြီးသွားပါပြီ .. အင်စတောလည်း ပြီးသွားပါပြီ
နံပါတ်နှိပ်ပြီးတော့ ခေါ်လိုက်တယ် ... ပိုက်ဆံ မလောက်ပါဘူး ဆိုပြီးတော့ ပြန်ပေါ်နေတယ် ဗျ ...
အလကား ဖုန်းခေါ်လို့ ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းလို့ .. သင်ပြပေးပါဦး ... ဒါမှမဟုတ် ပိတ်သွားတာလား ခင်ဗျာ...
ရေ Singing in ကနေမတတ်ဘူးဆိုတာ ကွန်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်
ရေ ၅ မိနစ်ပဲ ဖရီးလို့ ကျွန်တော် ရေးထားပါတယ် နော်
ကျွန်တော်ကိုတိုင်သုံးဖူး၊ခေါ်ဖူး ပြီးမှ တင်ထားလိုက်တာပါ
သေသေ ချာလေး ပြန် စမ်း ကြည့်ပါဦးနော်
media ring ကိုတော့ ကျွန်တော်သေသေချာ မစမ်းရသေးဘူး
ဖုံးခေါ်ဖို့ အကောင့်ထဲကို၀င်လိုက်ရင် အကြာကြီးဖြစ်နေပြီး မ၀င်တော့ပါဘူး
အဲ့အဆင့်ကနေတော့ မတတ်သေးပါဘူး ကျွန်တော် စမ်းတာတော့
အရှေ့က အကိုယ်တွေကတော့ ရတယ် လို့ အော် ထားတာပါပဲ
ကျွန်တော ဟိုးအရင် အင်တာနက်သုံးခါစ Pfingo တောင်မပေါ်သေးပါဘူး
အဲ့တုံးကတော့ media ring ကို စမ်းခေါ်ဖူးပါတယ် တကယ်လည်း သုံးလို့ရခဲ့ပါတယ်
နောက်တော့ Pfingo တွေ ပေါပေါလောလော ၆ လ ကျော်ကျော် လောက် ဖရီးပေးသုံးလိုက်တော့
သူ့ ကိုမေ့သွားခဲ့တာပါ ပဲ
အခု ဒီ ပို့စ် လေးမှာတွေ့တော့ ပြန်သုံးကြည့်လိုက်တော့
ကျွန်တော် ကိုတိုင် အဆင်မပြေတော့ ပြေပါတယ်လို့တော့ မပြောချင်ပါဘူး
ကိုယ်တိုင်သုံးလို့ရမှပဲ ရတယ်လို့ ပြောပေးပမယ်
ဟုတ်တယ်...မီဒီယာရင်း နဲ့ဘဲပြောမှာပေါ့...သူလည်း ဟန်းဖုန်းကိုခေါ်လို့ရတာဘဲကို...သူကမှ ပီဖင်းဂိုးထက်ကောင်းသေးတယ်...proxy setting မှာ localhost
port က 1080 နဲ့ သုံး ကောင်းမှ ကောင်းဘဲ (၁၀)မိနစ်တစ်ကြိမ်တော့ ပြန်ခေါ်ရမယ်နော်....ကျွန်တော်လည်း အစက မသိဘူး စင်္ကာပူကနေ တရုတ်ဖုန်းကိုလှမ်းဆက်တာ
အကြာကြီးပြောနေလို့ အိုဗာဆီး မဟုတ်ဘူးတဲ့ Mediaring နဲ့ ခေါ်တာဆိုတာနဲ့။.။။။။ your-freedomတော့ ဖွင့်ပေးရလိမ့်မယ်နော်.....